Meltdown iyo Specter ayaa sidoo kale saameeyay aaladaha Apple | Waxaan ka socdaa mac
Meltdown iyo Specter ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay aaladaha Apple
Waa wararka ugu khuseeya amniga dijitaalka bilihii la soo dhaafay, mana aha wax lala yaabo. Apple waxay xaqiijisay usbuucii la soo dhaafay in nuglaanta loo yaqaan Burburka iyo Specter, taas oo saameyn ku yeelata inta badan processor-yada Intel, waxay saameynayaan sida aysan u noqon karin si kale mid kasta oo ka mid ah aaladahaaga oo ku dhejiya processor.
Bayaankan ay soo saartay Apple waxaa weheliya baaqa deganaanshaha ee ay soo saareen injineerada Cupertino, tan iyo markii ay hubiyeen inaysan jirin waxqabadyo la yaqaan oo saameeya qalabka shirkadda iyo taasIntaa waxaa dheer, xalalka software-ka ayaa hadda lagu heli karaa qaab casriyeyn ah.
Qalabka isticmaalaya macruufka iyo sidoo kale macOS waxaa waxyeeleeyay dayacannadan. Hase yeeshe, kiisas lama yaqaan xilligan. Si kastaba ha noqotee, waaxda amniga ee shirkadda tiknoolajiyada ayaa horay u xallisay xaaladda, sii deynta cusbooneysiinta barnaamijka si loo saxo noocyada cilladaha amniga.
Saacadda Apple, sida ay xaqiijisay shirkadda Apple, wax saameyn ah kuma yeelan weeraradan midkood. Taas bedelkeeda, moodellada TV-ga Apple qaarkood ayaa dhibanayaal u ahaa weeraradan. Weli ma ogin dhab ahaan moodooyinka ay suurtagal tahay inay saameeyeen.
Waxaa la filayaa in, marka lagu daro, Apple waxay sii deyneysaa qaar ka mid ah hagaajinta Safari dhammaadka toddobaadkan, sidaas darteed hubaal yareynta dhibaatooyinka suurtagalka ah ee nuglaantaas.
Intel, dhinaceeda, sidoo kale waxay qabatay shaqadeedii, waxayna soo saartay bayaan rasmi ah oo ay ku muujinayso in, dhamaadka usbuuca, ay rajaynayso inay soo saarto warar xal u helida fashilaadan in ka badan 90% ka shaqeeyahaaga loo qaybiyey 5tii sano ee la soo dhaafay. Cusboonaysiintaani waxay ka dhigayaan hawlwadeennada inay ka ilaaliyaan wax-qabadka loogu magac daray Burburka iyo Specter. Laga soo bilaabo SoyDeMac, waxaan dheg u noqon doonnaa wararka ku saabsan arrintan, tan iyo markii aan tixgelinno amniga qalabkeenna oo muhiim ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Meltdown iyo Specter ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay aaladaha Apple